किन फिल्म खेल्दिनन् दीपिकाले सलमानसँग ? – Etajakhabar
किन फिल्म खेल्दिनन् दीपिकाले सलमानसँग ?
मुम्बई – सलमान खानसँग फिल्म खेल्न जो कोही कलाकार पनि मरिहत्ते गर्छन्। तर, बलिउड फिल्म उद्योगमा एक दशक विताइसकेकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले ‘दबंग’ नामले चिनिने अभिनेता सलमानसँग अझै फिल्म खेलेकी छैनन्।
दीपिकाले २०१५ मा प्रदर्शन भएको सलमानको ‘प्रेम रतन धन पायो’ फिल्म पनि अस्वीकार गरिन्। त्यसपछि सोनम कपुरले हिरोइनको भुमिका निभाइन्।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।दीपिकाले सलमानका साथै आमिर खानको ‘धुम ३’ फिल्म समेत समय अभावका कारण अस्वीकार गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष २३, २०७४ समय: १०:१०:३१